अनन्त वाग्लेको उपन्यास ‘कदम’ सार्वजनिक- साहित्य/विविध - कान्तिपुर समाचार
अनन्त वाग्लेको उपन्यास ‘कदम’ सार्वजनिक
काठमाडौँ — अनन्त वाग्लेको नयाँ उपन्यास ‘कदम’ सार्वजनिक भएको छ । उपन्यास आफूहरूलाई ‘जंगलका राजा’ भनेर चिनाउने राउटे समुदायका बारेमा आधारित भएको प्रकाशक काठमाण्डु पब्लिकेसनले जनाएको छ ।
राउटे समुदाय कर्णाली प्रदेशका दैलेख, सुर्खेत, सल्यान लगायत जिल्लाका जंगलमा ठाउँ सर्दै सर्दै बस्ने गर्छन् र यो समुदायलाई एसियाकै अन्तिम फिरन्ता भनेर पनि चिनिन्छ ।
स्थलगत अध्ययन गरी राउटे समुदायको जीवनशैली, इतिहास, हालको अवस्था, उनीहरूका सुखदुःख, परिवार, जीविका, प्रेम र प्रणयलगायत अनेक पाटा केलाएर उपन्यास तयार पारिएको लेखक वाग्लेले जनाएका छन् ।
३ सय १६ पृष्ठको यस पुस्तकको मूल्य ४ सय रुपैयाँ रहेको छ । लेखकस्वको अंश राउटे समुदायको हितमा खर्चने लेखकले पुस्तकमै घोषणा गरेका छन् ।
प्रकाशित : असार १८, २०७८ १२:११
'प्रधानमन्त्री ओली आफैं बीपी प्रतिष्ठानलाई डुबाएर नजिकैका निजी अस्पतालहरुको उद्घाटन गर्दै हिँडेका छन् ।'
असार १८, २०७८ इकान्तिपुर डेस्क
काठमाडौँ — चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसी बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका शीर्ष ४ पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन् ।
शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले पदाधिकारीहरूको कार्यशैलीकै कारण पूर्वी नेपालको स्वास्थ्य सेवा तथा देशकै मेडिकल शिक्षाको धरोहरका रुपमा स्थापना भएको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अहिले धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । भ्रष्ट र दलीय आधारमा प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएकाले पनि यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।
डा. केसीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ' दलीय वफादारिताका आधारमा पदमा पुग्ने नालायक र भ्रष्ट पदाधिकारीहरु रहेकोमा कसैको विमति छैन । त्यसमाथि पनि धरानस्थित प्रतिष्ठानको नजिकै खुलेका निजी मेडिकल कलेज र अस्पतालहरुका स्वार्थका लागि प्रतिष्ठान डुबाउन स्वयम् प्रधानमन्त्री र उनका स्वास्थ्यमन्त्रीहरु लागेको कुरा बारम्बार मिडियामा सार्वजनिक भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली आफैं बीपी प्रतिष्ठानलाई डुबाएर नजिकैका निजी अस्पतालहरुको उद्घाटन गर्दै हिंडेका छन् ।'
पछिल्लो समय प्रतिष्ठानको सुधारका लागि चिकित्सक, विद्यार्थी र कर्मचारीहरु आन्दोलनरत छन् । डा. केसीले बीपी प्रतिष्ठानका चारै शीर्ष पदाधिकारीहरुले थप एक मिनेट पनि पदमा रहने नैतिकता र वैधता गुमाइसकेको बताएका छन् । उनीहरुले तत्काल पद खाली गर्नुपर्ने र पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले सुझाव दिएअनुसार वरिष्ठता, इमान्दारी र योग्यताका वस्तुगत आधारमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने पनि डा. केसीको माग छ ।
साथै अहिले बीपी प्रतिष्ठानलाई डुबाएर आफ्ना कार्यकर्ताको अस्पताललाई अवैध रुपमा मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिन प्रधानमन्त्री ओलीले निरन्तर नाजायज दबाब दिइरहेका छन् । अर्कोतिर चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार विसं. २०८० सम्ममा सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खुल्नुपर्नेमा माफियाहरुको स्वार्थमा ओलीले त्यसलाई रोकेर राखेका छन् । बिचौलिया, माफिया र गुण्डाहरुको काम गर्नका लागि हामीलाई देशको प्रधानमन्त्री चाहिएको हैन, आम नागरिकको काम गर्नका लागि चाहिएको हो । कानुनतः सम्बन्धन दिन नमिल्ने भएपछि जोसुकैको अस्पताल भए पनि त्यसको निरीक्षणको कुनै अर्थ र औचित्य रहँदैन । त्यसैले आयोगको आकस्मिक बैठक राखेर प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको नाजायज दबाबमा गराइएको त्यस्तो निरीक्षणसम्बन्धी निर्णयको कुनै तुक छैन । त्यो काम तत्काल बन्द गरेर बीपी प्रतिष्ठान बचाउन उचित कदम नचालेमा तथा असंवैधानिक संसद विघटन नसच्याइएमा सत्याग्रहसहित आन्दोलनका कडा कार्यक्रमहरु ल्याउने जानकारी गराउँछौं ।
प्रकाशित : असार १८, २०७८ १२:०१